Sheekada filimka Blackmail: Irfan Khan markale wuxuu la yimid fariin adag oo daawadayaasha soo jiidatay – Filimside.net
Sheekada filimka Blackmail: Irfan Khan markale wuxuu la yimid fariin adag oo daawadayaasha soo jiidatay
Taariikhda: April 7, 2018
Atooraha caanka ah Irfan Khan xanuun ayuu Bollywood-ka kaga maqan yahay balse filimkiisa Blackmail ayaa sheeko ahaan siweyn loo soo dhaweeyay qaabka fariintaan reer magaalka loogu tala galay loo dhigay.
Jilaayaasha: Irrfan Khan, Kirti Kulhari, Arunoday Singh, Omi Vaidya, Gajraj Rao, Anuja Sathe, Prabhudhuman Singh Mall
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 19-daqiiqo
Qiimeynta fariinta filimkaan: 4/5 (Afar xidig)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkaan: Fariintiisa qarsoon qaabka loo dhigay iyo bandhiga heerka sare Irfan Khan iyo jilaayaasha kale sameeyeen.
Muxuu Ku Liitaa Filimkaa: Xoogaa waxaa yara fiicneyd in si adag loo faaf reebo wax yarna waqtiga laga dhimo.
Fariinta Filimka Blackmail Oo Kooban: Sheekada filimkaan waxay ku saabsan nolosha sedex qofood Dev (Irrfan Khan) – xaasle daacad ah, Reena (Kriti Kulhari) – marwo seygeeda qiyaameyso iyo Ranjit (Arunoday Singh) – nin jeceyl marwada la qabo ee seygeeda qayaameyso.
Balse wax walbo waxay isbadalayaan marka Dev (Irrfan Khan) uu ogaado in xaaskiisa ay qayaanto sidoo kalena qof kale xiriir qarsoodi ah la leedahay.
Dev (Irrfan Khan) sedex arin midkood inuu ku dhaqaaqo ayuu go’aan ku gaaraa waxayna sedexd arin kala yihiin: Xaaskiisa inuu dilo, Ninka xaaskiisa gogolka dhaafka la sameeyo inuu dilo ama inuu hanjabaad u geesto noloshana ku ciqaabo ninka xaaskiisa xiriirka la leh.
Dev (Irrfan Khan) wuxuu dooranaa inuu ku dhaqaaqo qorshaha sedexaad oo ah inuu nolosha ku dhibo, rakaatana galiyo ninka xaaskiisa xiriirka la leh.
Balse Dev (Irrfan Khan) sida uu wax u rabay si ka duwan ayay u dhacayaan, kadibna waxaa meesha kasoo baxeyso in afar qofood rakaato is galiyaan weliba Dev (Irrfan Khan) isaga naftigiisa waxaa rakaato lagu galinaa in la ceebeesto xaaskiisa gogolka dhaafka ay ku lug leedahay!
Haddaba qaybaha dambe filimkaan waxaa loo daawan doonaa dhamaan doorarka filimkaan ugu muhiimsan inay rakaato is galiyaan qof walbana qof kale isku dayo inuu nolosha ku ciqaabo ayadoo Dev (Irrfan Khan) xujooyin badan kusoo baxayaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Blackmail: Waxaa amaan weyn mudan Parveez Sheikh sida uu sheekada filimkaan cabsida mugdiga ah iyo shactirada u dhigay wuxuuna door walbo ka dhigay mid adag qoraal ahaan.
Director Abhinay Deo isagana sheekada si wacan ayuu isugu daba riday asigoo ka dhigay mashruucaan dhacdo kasto inaan laga xiiso dhigeyn sidoo kalena min bilaaw ilaa dhamaad aad sugeysid waxa xiga ee dhici karo oo aan la sadaalin karin.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Blackmail: Haddii aad heesatid jilaa Irfan Khan oo kale damaanad ayaad u heestaa in fariin walbo si heer ah loo jili karo, Irfan wuxuu mudan yahay Blackmail abaal marino kala duwan lagu siiyo waana mid ka mid ah bandhigyadiisa ugu wanaagsan oo sii badanayaan.
Kriti Kulhari iyadana door wacan ayaa filimkaan laga siiyay balse waxaa siweyn u hareeyay Irfan Khan inkastoo dadaalkeeda bandhig ahaan uu wacan yahay.
Arunoday Singh isagana door wacan oo mada daalo leh ayaa filimkaan laga siiyay waana qofka labaad ee saameyn ahaan Irfan Khan kusoo xigo waana jilaa Bollywood-ka ka faa’iideesan karaan.
Divya Dutta iyadana door adag ayay filimkaan ku leedahay waxayna ku mataleysaa marwo muran badan oo aan hadalka la gambanin.
Gunaanad: Director Abhinay Deo oo horey u sameeyay filimkii hirgalay Delhi Belly markaan fariintiisa heerka sare ah wuxuu u dhiibtay Irfan Khan oo isagana siweyn ugu hagar baxay.
Filimka Blackmail waa mid dadka reer magaalka soo jiidan doono ganacsigiisana ku xadidan magaalooyinka waa weyn balse fariintiisa mid xadidan ayay noqon kartaa madaama uu ka hadlaayo gogol dhaaf waxaana macquul ah in qoys walbo uusan daawanin filimkaan taasi oo ganacsigiisa xadidi doonto.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Blackmail:
Asc filimside irrfan Khan asuu jiran muusameeyay filimkaaan
Maya inta uusan xanuunka kusoo bixin ayuu duubay.